Siyaabo Raqiis Ah Oo Looga Soo Safro Aduunka - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Siyaabo Raqiis Ah Oo Looga Safro Adduunka
Isha sawirka: goabroad.com
Kuwo badan, u safrida aduunka waxay had iyo jeer ula muuqatay hawl aan macquul ahayn. Haddii aad had iyo jeer rabtay inaad booqato Rome tan iyo markii aad toban jirsatay ama aad u maleyneyso inay muhiim tahay inaad u baahan tahay inaad fasax ku qaadato meel kasta, qof walba waxaa laga yaabaa inuu safro hadda iyo ka dib marka ay ogaadaan siyaabaha jaban ee loo safro.
Socdaalku wax badan buu la yimaadaa. Waxaad ka hadashaa wakhtiga, walbahaarka ku lug leh, tacaburka iyo, dhammaan ka sarreeya, saamaynta dhaqaale - taas oo ah waxa ugu sarreeya ee dadku ka welwelaan, gaar ahaan haddii riyadu weligeed ahayd inay u safraan adduunka oo dhan.
Hal su'aal weyn ayaa ah, dhammaanteen ma awoodi karnaa inaan u socdaalno adduunka oo dhan? Mise, suurtogal ma tahay in si raqiis ah loogu safro adduunka oo dhan?
Si aad u sii fahamto siyaabaha loogu socdaalo aduunka ugu jaban ee kheyraadka, waxaan tixgelin doonaa jawaabaha su'aalaha:
1. Waa maxay habka ugu jaban ee safarka?
2. Sideed ugu safartaa miisaaniyad yar?
3. Sideen ugu safri karaa aduunka lacag la'aan?
4. Waa kuwee meelaha ugu wanaagsan ee loo safro aduunka? 5. Waa maxay Dariiqooyinka ugu Raqiisan ee loo safro 2021?
Waa maxay Habka ugu jaban ee loo safro?
Qaab-dhismeedka Miisaaniyadda habboon ayaa ilaa hadda ah habka ugu jaban ee loo socdaalo adduunka oo dhan.
Sideed Ugu Safraysaa Miisaaniyad Yar?
1. Si taxadar leh u dooro meesha aad u socoto
Meelaha qaar ayaa inta badan ka dhaqaale badan ama xitaa ka jaban meelaha aad wacdo gurigaaga.
Marka hore, tilmaan aad u weyn oo loogu socdaalayo miisaaniyad la shaqayn karo oo badan ayaa ah in la baaro meelaha ku fiican socdaalka.
2. Iska ilaali dabinada dalxiiska
Magaalooyinka waaweyn iyo xarumaha dalxiiska ayaa waqtiyo badan ka qaalisan ka leexashada jid fidsan!
Inta aad awooddo, isku day inaad doorato meelaha aad u socoto oo aan la aqoon.
3. Qaado caymiska safarka
Tani waxay u badan tahay inay tahay tilmaanta ugu muhiimsan ee safarka marka aad waddo miisaaniyad! Tani dhab ahaantii waa kharash dheeraad ah oo hore, laakiin markaa waxaad naftaada u qaddarin doontaa xallinta dhibaatadaas haddii safarkaaga laga noqdo, ama laga yaabo inaad ku xanuunsato khadka dibadda.
4. Socdaal xilli-xilliyeedka ka baxsan
Tani dhab ahaantii waa hal dariiqo oo lagu safro miisaaniyad yar. Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad dammaanad qaaddo sida cimiladu ahaan doonto, laakiin markaa, meesha aad dooratay ee aad u socoto waxay noqon doontaa mid aad u yar oo mashquul ah.
Marka laga reebo inaad kaydsato lacag aad u badan, waxaad naftaada u yeelan kartaa dhammaan.
5. Hore u sii qabso
Xaqiiqdu waxay tahay, heshiisyada neefsiga ee u dambeeya waxay noqon karaan hanti ama faa'iido weyn oo lama filaan ah, laakiin inta badan waa ka raqiisan tahay, xitaa aad uga dhib yar, inaad ballansato safarka, goobta hoyga iyo dhaqdhaqaaqyada si fiican ka hor.
Sideen Adduunka Ugu Safri Karaa Lacag La'aan?
1. Sariiraha fadhiga ee fadhiga
Waa inaad isla markaaba u diyaargarowdaa profile-kaaga sarifka fadhiga isla marka aad ka fikirto sida loogu safro aduunka lacag la'aan.
Kani waa shabakad ka caawisa isku xidhka martida loo yahay iyo socotada. Xor ayaad u tahay inaad halkaas ku joogto xitaa bilaash halka martigeliyahaagu ay u badan tahay inuu ku tuso agagaarka magaaladooda. Waxaa lagugula talinayaa inaad martigeliso dadka magaaladaada soo mara.
2. Bilaw inaad isku daydo inaad kaydsato ugu yaraan inyar/Lacag ka hel online
Waa muhiim inaad hesho tigidh diyaaradeed. Waa in aad fahanto in qofna uusan taas ku siin bilaash.
Sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa inaad lacag u kaydsato taas. Suurtagal maaha in qof dhintay uu jabo ka dibna ku fekero inuu bilaabo safar-wareeg ah oo adduunka ah (inkastoo blogyada ay u muuqdaan kuwo sahlan).
3. U safar meel ka jaban
Lacagtaadu waxay ku sii qaadi doontaa meelo ka mid ah Koonfur-bari Aasiya, Nepal, India, laga yaabee Kuala Lumpur, Malaysia, ama waxaad samayn kartaa Bariga Yurub ...
Samaynta meel miisaaniyadeed sax ah ayaa ku badbaadin doonta safar aad uga qaalisan inta aadan waligaa malaynayn.
4. Ku noolow miyiga
Inta badan ka fogaanshaha magaalooyinka waxay kuu badbaadin kartaa lacag aad uga badan inta aadan waligaa qiyaasi karin.
Hindiya tusaale ahaan, waxaad wax badan ku bixin doontaa magaalada caasimadda ah, New Delhi, iyo xitaa Mumbai marka loo eego haddii aad ka guurto 35 daqiiqo magaalooyinka.
5. Kaamam ama seexashada gaadiid habeen dhaxe ah
Waxa aad dooran kartaa in aad degto haddii aad raacdo boorsadaada hurdada iyo teendhadaada. Si kastaba ha ahaatee, tani waa shaqo badan, gaar ahaan haddii aadan waligaa horay u qaban.
Waa maxay Goobaha ugu Wanaagsan ee lagu Safro Adduunka?
1. Grand Canyon, Mareykanka.
Waa tabar, 1-mayl- qoto dheer, iyo sidoo kale ilaa 18-mile-ballaaran gash dunnidu leedahay.
2. Buuraha Blue Ridge, Maraykanka
Waxay ku taal bariga Maraykanka iyo qayb ka mid ah Appalachians weyn. Buuraha Blue Ridge way dheereeyaan iyagoo ka soo jiidaya cidhifkooda koonfureed ee Georgia
3. Oia Santorini, Greece.
Waxaad ka heli kartaa dusha sare ee dhagax leh muuqaal cajiib ah oo ku saabsan Volcano Palea, Nea Kameni, iyo jasiiradda Thirassia.
Kani waa noolaha kaliya ee ku nool dhulka oo aad ka arki karto hawada sare. The Great Barrier Reef waa mid aad u weyn.
5. Xeebta Amalfi, Italy
Tani waa mid aad u qurux badan, taas oo ku sii dheeraysa jiidashada xeebta qallafsan ee Campania, Italy, ee cidhifka Jasiiradda Sorrentine.
6. Lake Moraine, Canada
Waxaad ka heli kartaa meeshan dooxada fog ee Tobanka Peaks ee Rockies Canadian, Moraine Lake waxay heshay qurux emerald ah oo yar, oo qabow oo lagu quudiyo glacier.
7. Apenzell, Switzerland
Tani waa tan ugu dhaqan dhammaan gobollada Swiss; waa duni miyi ah oo wakhtigu joogsaday.
Sido kale waa meesha ay sida aadka ah ugu xusaan hidaha iyo dhaqanka iyo meesha 8,200-foot ee buurta Säntis ay daawato muuqaalka soo jiidashada leh ee kuraha cagaarka ah ee rogmanaya oo ay ka buuxaan dibi buuran.
Waa Maxay Siyaabaha Raqiis Ah Ee Loo Safro 2021?
Waxaan dib u eegis ku samayn doonaa qaar ka mid ah siyaabaha jaban ee loo safro 2021.
1. Isticmaalka Diyaaradaha ee Miles si aad u daboosho Duulimaadyada
Safarka ugu qaalisan waa iyada oo loo marayo kharashka tigidh diyaaradeed ama safar iyo, dabcan, hoyga, si kastaba ha ahaatee, kasbashada mayl diyaaradeed oo kugu filan waxay kuu ogolaanaysaa inaad nadiifiso kharashka duulista miisaaniyadaada mararka qaarkood.
2. Tixgeli Safarka Qoyska oo aan qaali ahayn
Cruising had iyo jeer waxay siisaa mid fursad cajiib ah oo lagu booqdo tiro wanaagsan oo meelo loo tago, hal qiimena wuxuu dabooli karaa ku dhawaad ​​dhammaan kharashyada safarka.
Faa'iidooyinka soo gudbinta qaddarka hore waxay ka dhigi kartaa miisaaniyada safarka si gaar ah u fudud xubnaha qoyska kala duwan, maadaama aad ku jirto cunto, hoy iyo baakado kale.
3. Buuga Guryaha Kirada ee Hudheelada
Airbnb iyo guryaha is-kaashatada kiraynta hadda waxay noqdeen wax caadi ah waxayna u korayaan sababahan dartood: Waxay ku siinayaan meel bannaan oo aad ku noolaato sida haddii aad tahay qof maxalli ah ku dhawaad ​​dhammaan meelaha aad tagto.
Waxa soo kordhay ayaa ah in waxyaabo badan oo beddelaad ah ay noqon karaan kuwo la taaban karo oo aad si macquul ah u qiimeyn karto iyaga - ballansashada hudheel, gaar ahaan haddii aad qoys leedahay.
4. Soo fur abaal-marinaha Hudheelka loo dhan yahay
Qaar ka mid ah barnaamijyada abaal-marinaha huteelada, oo ay ku jiraan IHG Rewards Club iyo World of Hyatt, ayaa kuu oggolaanaya inaad soo furto dhibcaha doorashada inaad joogtid hoteellada loo dhan yahay ee Kariibiyaanka iyo Mexico.
Beddelkaani aad ayuu uga fog yahay lacag la'aanta maadaama aad u baahan doonto inaad u duuliso meeshaad ku socoto.
5. Iska ilaali Heshiisyada Duulimaadka
Haddii aad xiisaynayso inaad u safarto meel fog oo aad rabto inaad wax badan ku badbaadiso kharashka ku safraya diyaarada, ka fiirso dalabyada safarka diyaaradeed ee wakhtiga gaaban ama heshiisyada shabakadaha sida The Secret Flying and Flight Deals.
Goobahani waxay bixiyaan faahfaahin ku saabsan heshiisyada sida caadiga ah socda dhowr maalmood oo keliya, taas oo macnaheedu yahay inaad diyaar u tahay inaad tallaabo qaaddo inta heshiisku kulul yahay.
Marka aad hubiso wakhtiga, waxa hubaal ah in aad ka heli doontid heshiisyo caalami ah oo ka yimi Maraykanka meelo ay ka mid yihiin Talyaaniga, Filibiin iyo Jabaan wax ka yar $500 oo safar wareeg ah.
6. Hesho Lacago Safar oo Bilaash ah
Qaar ka mid ah kaararka deynta safarka ayaa bixiya faa'iidooyin afka ah oo kaa caawin kara inaad lacag ku badbaadiso safarka.
Tusaale ahaan, kaarka kaydka ee Chase Sapphire waxa uu bixiyaa ka noqoshada safarka bilaashka ah iyo caymiska hakadka, caymiska shilalka safarka, caymiska kirada baabuurta aasaasiga ah, caymiska daahitaanka shandad, caymiska daahitaanka safarka, caymiska ka bixida degdega ah, iyo in ka badan.
7. Duulimaadyada Buuga Hore
Iyadoo mararka qaarkood aad heli karto duullimaad jaban, gaar ahaan marka aad ballansan karto wakhtiga ugu dambeeya, taas lidkeeda sidoo kale waa run.
Qabashada tigidhada diyaarada goor hore waa hab cajiib ah oo lacag lagu badbaadiyo, ilaa iyo inta aad qorsheynayso safarkaaga ugu yaraan 6-9 bilood.
Sideen iskaga ilaalin karaa khidmadaha?
Haa, khidmadaha safarka waa baahsan yihiin oo waxay awoodeen inay galaan dhinac kasta oo safarka ah, taas oo ay ku jiraan hoteelada, duulimaadyada, iyo baabuurta kirada. Waxa wanaagsan ayaa ah inaad waxyaalahaas oo dhan iska ilaalin karto.
Intee in le'eg ayaa hore u socotaa ma in aan buugaagta?
Run ahaantii, qiimaha tigidhada diyaaraduhu way isbedbeddeli karaan oo xitaa si joogto ah ayey isu beddelaan, mararka qaarkoodna ma saadaalin kartid. Si kastaba ha noqotee, waxaad had iyo jeer raadin kartaa dhowr xeeladood si aad u cabbirto, maadaama ay jiraan qaar la heli karo.
Sideen ku ogaan karaa marka uu heshiis yahay heshiis?
Si daacad ah, laakiin nasiib darro, si isku mid ah uma abuuraan heshiisyo socdaal.
Waa maxay Xuquuqdayda Marka Duulimaadkaagu dib u dhaco ama la joojiyo?
Marka aad la kulanto daahitaanka duulimaadka ama ka noqoshada, ogow xuquuqahaagu way ka duwanaan doonaan. Tani waxay ku xiran tahay xaaladda cimilada, waxaa jira duufaanno jiilaal iyo duufaanno, iyo cilladda diyaaradda marka la eego daahitaanka farsamada.
Miyaan u baahanahay Caymiska Safarka?
Jawaabta su'aashan waxay kuxirantahay haddi aad rabto inaad safar degdeg ah ku qaadato oo aadan lacag badan ka bixin, malaha uma baahnid caymiska safarka.
Socdaalku waxa uu noqon karaa mid daal badan, gaar ahaan dhinaca maaliyadda, laakiin haddii aad leedahay qorshe yar iyo xoogaa dadaal hal abuur leh, waxa hubaal ah in aad dunida oo dhan ugu safri karto dhaqaalaha ugu jaban.
Dib-u-eegista Wealthbar Vs Wealthsimple 2022: Goobta Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee Ugu Fiican
12 Software Xisaabinta Ganacsiga Yaryar ee ugu Fiican Sanadka 2022
21 Waxyaabo madadaalo leh oo la sameeyo Habeenkii | Maskaxda Afuuf!
Sida caadiga ah, waxaad u badan tahay inaad habeenkii seexan lahayd. In kasta oo ay tani u noqon karto madadaalo dadka soo dhex gala, haddana…
Waxay u egtahay mid qosol leh ?! $ 1 maalintii oo dhan RV oo dhan, waddan dhan ?! Xaqiiqdii ma sameeyo…
Haddii ay jirto hal shay oo dadka badankiisu ku raaxaystaan ​​samaynta, waa safarka. Laakiin marka ay ka fikiraan qiimaha…
Ma lagu siiyaa lacag si aad ugu noolaato Alaska? Haa! bal eeg inta
Waxaan maqlay dadka oo sheegaya inaad runtii ku noolaan karto oo aad lacag ka heli karto Alaska si bilaash ah. Nasiib darro,…
Xiriirrada waxaa ka buuxa kor iyo hoos qaar badanna ma sii socdaan wax ka badan hal toddobaad. Haddii aad leedahay…